April 2020 - Latest Myanmar News
ဆီးနှင့်ပတ်သက်လျှင် ဆီးဖြူသီး၏ အစွမ်း
ဆီးပူး၊ ဆီးအောင့််၊ ဆီးကျဉ်၊ ဆီးချုပ်၊ဆီးကျန် ဖြစ်ပါလျှင် အရှင်းပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်း ဆီးနီ၊ ဆီးဝါ၊ ဆီးချုပ်၊ ဆီးအောင့််၊ ဆီးပူး၊ ဆီးကျဉ်၊ ဆီးကျန် ဖြစ်ပါလျှင် အရှင်းပျောက်ကင်း ဆီးရောဂါကင်းစေသော ဆေးနည်းအား ကျေးဇူးတော်ရှင်ရွှေပေါ်ကျွန်း ဆရာတော်ကြီးထံမှ အမှတ်မထင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရားသည် ဆေးပညာ အလွန်ကျွမ်းကျင်ပါသည်။ တပည့်ဝေနေယျများအား တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးနည်းများ ပေးသည်လည်း ရှိပါသည်။ “နနွင်း၊ ဆီးဖြူ၊ပျားရည်ကူက မလွဲသေချာ ဆီးရောဂါပျောက်၏” ဟု မိန့်ဖူးပါသည်။ ယုံစွာအမှန် လုပ်ဆောင်ရန်က ဝေဒနာရှင်၏ တာဝန်တည်း ..။ ယခုတင်ပြသော ဆီးရောဂါဆေးနည်းမှာ လူသိနည်းပါသည်။ ယောကျာ်းသား အတော်များများ ဆီးရောဂါမျိုးစုံ ခံစားရတတ်ကြပါသည်။ နနွင်းမှုန့် (၃) ပဲသား ဆီးဖြူသီး သတ္တုရည် (၁) ဇွန်း … Read more
ဘာလိုိ့ နှာစေးရတာပါလဲ??? နှာစေးရခြင်းအကြောင်း (၁၅)မျိုး နှပ်က နှာခေါင်းတွင်းရှိ Mucous Membrane အမြှေးပါးလေးက ထုတ်ပေးပြီး အဆုတ်ထဲကို ဖုန် ဝတ်ဆံ နဲ့ ဘက်တီးရီးယား တွေမဝင်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ. နေ့တိုင်း ချွှဲ သလိပ် နှပ်တွေ ထုတ်နေပေမယ့် ကျွန်ုပ်တို့က သတိမထားမိပါဘူး. တံတွေးနဲ့ အရည်တွေနဲ့ ရောပြီး လည်ချောင်းထဲကို စီးကျသွားလို့ပါ.နှာစီးတာ နှာသီးရောင်တဲ့အခါ နှပ်တွေပိုထွက်တာ အားလုံးလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ. ဒါဆို ဒေါက်တာဇီဝက က ထုံးစံလေးတိုင်း နှာစေးရခြင်း အကြောင်းတွေ ပြောပြသွားပါမယ်… (၁) ဓာတ်မတည့်ခြင်း အိမ်ပြင်ကော အတွင်းမှာပါ ဖြစ်တတ်ပြီး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတွေကတော့ ဖုန်မှုန့် ဝတ်ဆံ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေပါဝင်ပါတယ်. လက္ခဏာတွေက နှာချေမယ် ခေါင်းကိုက်မယ်. လည်ပင်းနာတာတွေဖြစ်ပါတယ်. အဲ့ဒီ … Read more
သင့် စိုက်ခင်းမြေ အမျိုးအစားအား ချဉ်သလား ၊ ငံသလား အလွယ်တကူ ခွဲခြားနည်း
သင့် စိုက်ခင်းမြေ ချဉ်သလား ၊ ငံသလား အလွယ်သ်ိချင်လျှင်……. မီးဖိုချောင်သုံး ဗီနီဂါ နဲ့ မုံ့ဖုတ်ဆော်ဒါ ရှိရင်ရပြီ။ စမ်းသပ်နည်းကတော့ အောက်ပါပုံ အတိုင်းပဲပေါ့။ စမ်းသပ်နည်း စိုက်ခင်းထဲမှ မြေသားအနည်းငယ်စီ ကို နေရာခွဲပြီး ၊နို့ဆီတဗူးခန့်ယူပါ။ ပြီးရင် သီးသန့်ဖန်ခွက်တခုထဲသို့ ၊ခုနက မြေထဲက နှစ်ဇွန်းခန့်ထည့်ပါ။ အဲဒီအပေါ် ဗီနီဂါ အရည် ဖန်ခွက်တဝက်ခန့်လောင်းထည့်ပါ။ အမြှုပ်တွေထွက်လာရင်၊ မြေငံပါသတဲ့။pH 8 +ဝန်းကျင်ပေါ့။ အကယ်၍ အမြှုပ်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီမြေသားကို နောက်တနည်းဖြစ်တဲ့ ဆော်ဒါနဲ့ထပ်စမ်းရပါမယ်။ သီးခြားခွက်ထဲမှာ မြေသား နှစ်ဇွန်းခန့်ထည့်မယ်၊ အဲဒီအပေါ် ရေသန့် နဲ့ ဖျော်မယ်။ရွှံ့ရည်ရပြီဆိုရင် အဲဒီထဲကို ဆော်ဒါထည့်မယ်။ အမြှုပ်ထွက်ရင် မြေချဉ်လို့ပါတဲ့။pH5ဝန်းကျင်ပေါ့လေ။ အဲဒါ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။ အဲလို စမ်းသပ်လို့မှ အမြှုပ်မထွက်ဘူး၊တုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ သင့်မြေဟာ … Read more
မိတ်ပျောက်တဲ့ဆေးနည်း ဟုတ်ကဲ့အမ မင်္ဂင်္လာပါ ခင်ဗျာ … ဒီနွေကအပူရှိန်များပြီး မိတ်တွေထွက်ကြတယ်ဆေးနည်းမေးတဲ့သူတွေလည်း တွေ့နေရတယ်နော် … ဟုတ်တယ်အမရေ့ ချွေးမိတ်ခေါ်မလားပဲခင်ဗျ . အေးပါ မောင်လေး အမပင်စိမ်းဆေးနည်းမျှဝေပေးတာ ဝမ်းသာပါတယ် အခုလည်း အမကိုယ်တွေ မိတ်ပျောက်တဲ့ဆေးနည်းလေးပေးပါ့မယ် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျ ကျွန်တော် တင်ပေးပါ့မယ် တခြားတော့ မဟုတ်ဘူး သရက်သီး အစေ့ကအပေါ်ခွံကိုခွာ အတွင်းကအသားနုကို တနေပြပြီး သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ်မှာ သွေးပြီးလူးပေး တရက်ကို နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် အဆင်ပြေသလိုလူးပေး တရက်နှစ်ရက်နေရင် မိတ်တွေပျောက်ပြီနော် အဲ့ဒါအမတို့ သုံးနေတဲ့ကိုယ်တွေ့ဆေးနည်းလေးပါ ။ ။ အမဆေးနည်းက တန်ဖိုးနည်းဝန်ပါပဲခင်ဗျာ ကျွန်တော်ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါ့မယ် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ ရွှေခြံသူ မအိမ်ကံ ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။ Photo – Fb စိုင်း မင်း … Read more
ယနေ့ ထပ်တိုးလူနာသစ် မရှိ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ၌် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန(ရန်ကုန်)မှ (ပထမသုတ်) အဖြစ် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော အသွားအလာကန့်သတ်ခံရသူ နှင့် စောင့်ကြည့်လူနာ (၈၉) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော စောင့်ကြည့်လူနာ (၂၁) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၀)ခုတို့တွင် – COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိပါ။(ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာသစ် မရှိပါ။) ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၉-၄-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီအထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု လူနာ (၁၅၀) ဦးရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ ၃။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) အနေဖြင့် ထိုသို့ စောင့်ကြည့်လူနာနှင့် အသွားအလာကန့်သတ်ထားရှိသူများ၏ … Read more
ကျန်းမာရေးအတွက် လတ်တလော ဖေရှင်းနိုင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းလေးများ
ကျန်းမာရေး ပြဿနာအချို့ကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းများ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရတဲ့အခါ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ အသေးအဖွဲတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါ ဆေးဝါး အကူအညီထက် အခုဖော်ပြပေးမယ့် ထူးထူးဆန်းဆန်း နည်းလမ်းတွေက အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ဂနာမငြိမ် ဖြစ်တဲ့အခါ ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့် နည်းလမ်းကတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်ရဲ့ လက်မကို ထောင်ပြီး လေနဲ့ မှုတ်ပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်မဟာ အာရုံကြောတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်ခြင်းနဲ့ သွေးပေါင်ချိန် တက်လာခြင်းကို လျော့ကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) ရုတ်တရက် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရုတ်တရက် ခေါင်းကိုက်လာတဲ့အခါ လက်ဖဝါး … Read more